Jaaliyadda Puntland ee gobalka Sanaag oo duullaanka Somaliland war murtiyeed ka soo saaray (dhegayso | akhriso) – Radio Daljir
Jaaliyadda Puntland ee gobalka Sanaag oo duullaanka Somaliland war murtiyeed ka soo saaray (dhegayso | akhriso)
Maarso 19, 2019 5:50 g 0
iyado dhawaan degaanka Yube ee gobalka Sanaag ay la wareegeen ciidamadda Somaliland ayaa waxaa soo baxaya cambaraynta loo jeedinayo maamulka Somaliland.
Jaaliyadda Puntland ee Gobalka Sanaag oo kulan balaaran ku yeeshay Sweden waxay kaga hadleen dulaanka Somaliland ee gobalka Sanaag siiba degaanka Yube.
Warmurtiyeedka jaaliyadda hoos ka akhriso:
Beyaan: Colaadda Somaliland ka hurinayso gobolka Sanaag
Dadweynha soomaaliyeed waxa aan u sheegeynaa in duullaanka Soomaliland ay ku soo qaaday gobolka Sanaag uu yahay mid la doonayo in lagu caburiyo fekerka soomaaliweyndoonka ah ee ay qabaan shacanka Sanaag. Dawladda Soomaaliya iyo Puntland waxaa ku waajibtay in ay difaacaan gobolka Sanaag sida uu dastuurku farayo. Gobolka Sanaag waa gaarhaya midnimadda soomaaliyeed in badanka muujisay intii dagaalka sokooye Soomaaliya ka socdey.
Colaadda ka aloosan Sanaag waxa keliya oo sharixikara waa hogaanka maanta ka jira Hargeysa/Somaliland. Hogaanka maanta taladda haya Hargeysa waa kii falkiyey oo horseeday dagaalka SNM ku qaaday gobolka Sanaag 1988. Mid ka mid ah taliyeyaashii SNM oo maanta ah hogaamiyaha Somaliland waa kii shalay ahaa dagaal-ooge. Dagaal-ooge Musse Bixi waxa uu falay xasuuq oo ka geysstay Dilla iyo Boorame, welina boogahii xasuuqa ay SMN geysatey way damqanayaan weli. Boogta waxa ay qaraxday markale markii ay agoontii waalidkood la xasuusqay ay xus u qabteen waalidkooddii xasuuqa ku nafwaayey oo xabsiga loogu taxaabay maxaad waalidkiin u xusteen. Maantana waxa uu u tafaxaytey in uu dhiigu mulacyeyso gobolka Sanaag.
Indhahayagu waxa ay makhraanti ka noqdeen in maamulka Somaliland uu ku soo daabulayo cutubyo ciiddamo gaashaaman, oo duullaan ah. Maxaa colaad soomaali dhexdooda looga oogayaa? War toloow colka jooga! Soomaali colaad horleh ummabaahna.
Waxaa wali qoyan xad-gudubki iyo xasuuqii ciidamadda Somaliland ay ka geysteen gobolka Sool, la caburiyey dadweynaha, gaar ahaan dhalinyara iyo haweenka, gabdhihii la fara xumeyey iyo mujtamacii oo loo diidey in ay fekerkooda cabiraan. Waxaannu Somaliland xasuusinaynaa Yube, Aricadeeye maaha, Baranna maaha Laascaanood, Ceeldaahirnana ma aha Tukaradh. Kafiirso intaadandan falin!
Waxa uu qaynuunka caalamka iyo kan shareecadda islaamku isku raacsantahay in uu ruuxu xaq u leeyahay in uu is-difaaco haddii qofka la soo weeraro qoyskiiska iyo dalkiisa. Is-difaacu waa damaanad caalami ah. Xaquuq ay qarammadda midoobadey ay ku qirtay qaynuunkeedda.
Falceliska shacabka gobolka Sanaag ee ku wajahan daandaasiga iyo duullaanka Somaliland, waa mid soomaali dhan ay indhaha ku hayso, waxaa dadweynaha Sanaag uu kaga jawaabo. Difaaca calanka iyo midnimidda soomaaliyeed, Miisaan ayey inna saareysa maadaama, in isirka qoomiyadda soomliyeed uu ka soo jeedo gobolka Sanaag, kalago’na aanay marna qaadankarin shacabka reer Sanaag,waa mid laga dheregsanyahay, waxii dhiig leh oow kaca.
Ugu bandeyntii waxannu dawladda dhexe ee Soomaaliya xasuusineenaa in dadka gobolka Sanaag uu san qabin fekerka kala qoynta dalka Soomaaliya iyo in dadka gobolka u dhashay oo keliya ay u matelikaraan wadahadaladda dib-uheshiinta shacabka dadweynaha soomaaliyeed.
Dadka gobolka sanaag waligii gumeysidiid ayuu ahaa, maantana waxii aad kaga falcelisaan gardaradan waa mid taariikhddu qori doonto.
Waxaa aannu si adag u tilmaameenaa in wadahadalada soo noq noqdada ee la leeyahay waxaa lala gelayaa Soomaaliland ay xaaraan yihiin, aynna wada hadaladaasi run ahaantii yihiin dembi laga gelayo jiritaanka soomaaliyeed. Koox yar oo Hargeysa isku xirtay lagalama hadli karo jiritaanka dalka iyo dadka soomaaliyeed mana jiro nin awood u leh in uu taas gorgortan ka galo, waanuna uga digeenaa Madaxweyne Farmaajo taas.
Siyaasiyiinta metela goboladda waqooyi, gaar ahaan Awdal, Sanaag iyo Sool waa in ay ka soo horjeestaan wada hadaladaas codkoodana ay maqlaan dadka ay meteleen ee magacooda kuraasta ku fadhiyaan.
Baaqani waxa uu taageerayaa baaqa ay soosaareen Garaad Cabdullahi Cali Ciid iyo madax-dhaqameedka degmedda Yube.
Baaqani waxa uu ku baxay: Soomali, english iyo Swedish.
Waxii faahfaahin ah kala xirirr [email protected]
Cawad Cabdirahman Xirsi
Dirir Maxamuud Ducaale
Xamud Mohamed Ducaale
Jahliyadda gobolka Sanaa gee Iswiidhan
Haddaba Cawad Cabdiraxmaan Xirsi oo kamid ahaa Masuuliyintii shirkaas ka qaybgalay ayaa Radio Daljir uga warramay kulanka jaaliyadda Puntland ee gobalka Sanaag iyo sida ay uga xunyihiin duullaanka Somaliland ay Yube ku soo qaaday.
Warka DDM iyo Wariye Faadumo Dagan (Daawo)